Ukupeyinta imoto-kutheni kwaye njani? Izinto eziluncedo nezingalunganga
Abaqhubi abaninzi kungekudala okanye kamva bacinga ngeglasi enombala weemoto zabo. Zininzi izizathu zoku: umnqweno wokuzifihla emehlweni akho, kunye nokwenza ukubonakala kwehashe lakho lesinyithi kunesitayile ngakumbi kwaye kungoku, kunye nokukwazi ukuphelisa ukukhanya kwelanga okuphazamisa ukuqhuba, nokunye okuninzi.
Olona ncedo luphambili lwale ndlela yothungelwano lwangaphandle emotweni kukulula kwalo msebenzi kunye nexabiso eliphantsi. Ngendlela, kufanelekile ukuba uqaphele ukuba ixabiso eliphantsi alisoloko luphawu lomgangatho ophantsi wemathiriyeli kunye nomsebenzi, kodwa kunokuba ngenxa yokusetyenziswa kwendlela elula yokusebenzisa umbandela.
Ngokubanzi, yenza iintlobo ezahlukeneyo Ukutsala imoto Namhlanje kunokwenzeka kungekuphela kumaziko enkonzo abizayo, kodwa nakubarhwebi babucala abasebenza ezi ntlobo zomsebenzi ngqo kwigaraji yabo.
Izinto eziluncedo nezingalunganga zokuthayipha iglasi ezenzekelayo ngohlobo ngalunye lokuthinta lunamacala alo aqinisekileyo kunye nokungalunganga, ke apha siza kwenza imeko-bume ngokubanzi kwaye siqwalasele ezona ntlobo ziphambili kunye neempawu zokuthinta. Izinto eziluncedo ngefestile yemoto yokufaka intuthuzelo. Oku kudibanisa kubangelwa ngumnqweno wokuzifihla emehlweni.
Iifestile ezinemibala yemoto zilungele ukuhlala okucocekileyo kunye nokunethezeka komqhubi kunye nabakhweli ngaphakathi emotweni. Ukongeza, ngenxa yokubonakala kwethoni, ifuthe elithe ngqo lokukhanya kwelanga kunye nemitha ye-ultraviolet ayifakwanga, ngenxa yoko, ngexesha elishushu, iqondo lobushushu lomoya ngaphakathi kwimoto eqaqambileyo iya kuba sezantsi kakhulu kunakwimoto ngaphandle kokuthinta. Ukusebenza.
Ukupeyinta kukhusela ngokugqibeleleyo izinto ezinqunqiweyo zangaphakathi ekuvezeni ukukhanya kwelanga, ukuze loo nto ingomi, ayilahli umbala wayo wokuqala, ke ngoko, igcina imali ngokufaka amaqweqwe, njl. Ukhuseleko lwezinto (ukhuseleko nje).
Abakho baninzi abaqhubi abacinga ukuba ukhuseleko lwezinto ngaphakathi elorini luxhomekeke ekubeni iifestile zemoto zenziwe zakhanya na: ukuba izinto ngokungakhathali ezishiywe kule ndlwana azibonakali ngaphandle, isilingo sokuzilungisa sivela kancinci kakhulu.
Kwaye ngexesha lengozi, iglasi efakwe ityhefu ayophuli iziqwenga ezincinci kwaye ke ayibangeli monakalo kumqhubi nakubakhweli. Ukubonakala kwemoto enomtsalane. Rhoqo, iintlobo ezahlukeneyo zokufaka zifakwa ngokuchanekileyo ukwenzela ukuba ingaphandle lemoto yakho isebenze ngakumbi, ngakumbi ukuba usebenzisa izinto ezinombala oqaqambileyo wokupeyinta.
Umngcipheko wokuthintela ukonakala kokubonakala. Le ngxaki ibonakaliswa kuphela xa icwecwe, ukuyibeka kakuhle, ukugqitha: ngeiglasi ezimnyama kakhulu, ukubonakala ngokungathandabuzekiyo kuyawohloka, okungavumeli umqhubi ukuba avavanye ngokupheleleyo imeko endleleni. Oku kubuyela umva ngakumbi ebusuku, xa uqhuba kwimeko yenkungu enzima, imvula okanye imozulu enamafu. Inkqubo-sikhokelo yowiso-mthetho.
Xa uthatha isigqibo sokuthinta iifestile zemoto yakho, kunyanzelekile ukuba ufunde iimfuno zamapolisa ezendlela kolu hlobo lokuzenzekelayo: okwangoku kuvunyelwe kuphela iintlobo ezithile zokupeyinta, kukwakho neemfuno ezithile zepesenti evumelekileyo yokungena kokukhanya . Ezona ntlobo ziphambili zokwenza iitoni zitshize. Isekwe kwinkqubo eyinkimbinkimbi ngokwetekhnoloji, ebizwa ngokuba yiplasma okanye i-magnetron. Le ndlela ihlala isetyenziswa ngexesha lokuveliswa kweemoto ezingenisiweyo. Yenza le tint nasekhaya, kodwa kulo mzekelo, umgangatho, njengomthetho, ushiya okunqwenelekayo.
Iinkonzo - ukumelana nomonakalo womatshini kunye nokusebenza okuphezulu. Bendlela - ngexabiso eliphezulu, umsebenzi ungenziwa ngomgangatho ophezulu kuphela kumzi-mveliso, kodwa akunakwenzeka ukuba ususe ezo tinting. Umboniso wefilimu. Kukho uluhlu olubanzi lweentlobo zeefilimu kwintengiso, ezahlukileyo ngombala kunye nobumnyama, nangabavelisi.
Ngokobuchwephesha, ukufakwa kwefilimu kwiglasi akukho nzima; ngesakhono esithile, kunokwenziwa ngokuzimeleyo. Nangona kunjalo, kungcono ukubhenela kwiingcali ezingazukubeka xabiso liphezulu kolu hlobo lomsebenzi, kwaye kwangaxeshanye ziya kwenza umsebenzi ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Iinkonzo - ukulungelelaniswa kokufakela, ukufumaneka, ukukwazi ukukhupha.
Bendlela - yonakele lula, turbidity kunokwenzeka ngexesha lokusebenza, oko nako ukugqwetha umfanekiso yokwenene. Ukususwa kwetoni. Ingaboniswa ngokohlobo lwepaneli yeplastiki, okanye yenziwe ngesiseko sefilimu ye-silicone. Kwizazi-ngexabiso eliphantsi, ukusebenziseka lula, ukukwazi ukukhupha ngokukhawuleza. Bendlela - ithatha indawo eluncedo kwigumbi lemithwalo yemoto.
Ukuvela ngokutsha kwe-UAZ 3303. Ukutsala imoto yasekhaya
Isixhobo se-injini yemoto. Inkcazo, imigaqo yokusebenza
Ukuseta "uloyiso": ubomi obutsha bemoto endala
Edlulileyo Ngaba iimagnethi zokonga amafutha yinkohliso?
Okulandelayo Ukubalwa kwendlu yokwakha
Imibuzo ye-81 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,854.